တစ်ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာ Semiconductor ပြတ်တောက်မှု ကိစ္စ အဆင်ပြေတော့မယ်လို့ ဘိုင်ဒန်ပြောကြား! – MyMedia Myanmar
ကားထုတ်လုပ် ရေးလုပ်ငန်းတွေ အတော်များများကို ဆိုးကျိုးတွေ သက်ရောက်ခဲ့ရတဲ့ ကိစ္စကတော့ အခုလက်ရှိအချိန် ဖြစ်ပွား နေဆဲ ဖြစ် တဲ့ Semiconductor Chip ပြား ပြတ်လပ်မှု ပြဿနာပါပဲ။ အခု ဒီပြဿနာ ကြောင့် Cadillac Escalade ဆိုရင် Key Feature တောင် ထည့်သွင်းမပေးနိုင် တော့သလို Nissan အနေနဲ့ လည်း အခု အကျိုးဆက် ကြောင့် အတော်လေး အထိနာခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါပေ မယ့် ကားထုတ်လုပ် ရေးလုပ်ငန်းတွေရော တာဝန်ရှိသူတွေကပါ အခု ပြဿနာ အမြန် ဆုံးပြေလည် နိုင်ဖို့ အတွက် ကြိုးစားနေကြတာ ဖြစ် ပါတယ်။ BMW အနေနဲ့ လည်းထုတ်လုပ်ရေး ကုန်ကျစရိတ်တွေကို လျှော့ချခဲ့ပြီး အမေရိကန်လွှတ်တော်မှာလည်း နိုင်ငံတွင်းက Semiconductor Chip ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် ဒေါ်လာ သန်းပေါင်းများစွာ ရင်းနှီး မြုပ်နှံဖို့ အတည်ပြု ပေးလာပါပြီ။ အခုလို မျိုး ဒီပြဿနာ တစ်ခုတည်းကို ပြေလည်နိုင်စေဖို့ အားလုံး ဝိုင်းဝန်း ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့် ဒီ ပြဿနာက တစ်ကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ အမြန် အဆင်ပြေလာတော့မယ်လို့ ဘိုင်ဒန် အစိုးရအဖွဲ့က ဆိုလိုက်တာ ဟာ သိပ်တော့ အံ့ဩစရာ မရှိတော့ပါဘူး။
အမေရိကန်ရဲ့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အတွင်းရေးမှူး Gina Raimondo က သမ္မတရဲ့ အခု ပြဿနာ ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေပုံတွေကို ပြောပြ ခဲ့ပြီး Semiconductor ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လည်း အရေးပေါ် ဆက်တိုက် တွေ့ဆုံခဲ့သလို သူတိုရဲ့အထောက်အပံ့ လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ကားထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတွေ အပါအဝင် Customers တွေ အထိပါ တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ တာဝန်ရှိသူတွေ ရဲ့ အဆိုအရ တော့ အခုလိုတွေ့ဆုံမှု ကြောင့် ကားထုတ်လုပ် ရေးပိုင်းတွေနဲ့ ဝယ်ယူလိုသူတွေ ရဲ့ အကြား မယုံမကြည်ဖြစ်နေခဲ့တာ တွေကိုပါ ခြေဖျက် နိုင်ခဲ့ တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီ တွေ့ဆုံမှုနဲ့ နောက်ဆက်တွဲ သတင်းကောင်း တစ်ရပ်အနေနဲ့လည်း ကားထုတ်လုပ်ရေးတွေ ဆီကို အဆိုပါ Semiconductor ပစ္စည်းတွေ ပြန်လည် ထောက်ပံ့လာမှု တဖြည်းဖြည်း ပြန်မြင့်တက်လာပြီလို့ သိရပါတယ်။ အမေရိက အနေနဲ့ မလေးရှား နဲ့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတိုရဲ့ အစိုးရတွေ ကိုလည်း ဖိအားပေးမှုတွေ ပြုလုပ်နေပြီး အခုလို ကိုဗစ် ကပ်ရောဂါ ရှိနေတာတောင်မှ အနည်းဆုံးတော့ စက်ရုံတွေကို ဖွင့်လှစ်ထားပြီး အရေအတွက် အနည်းငယ် ဖြစ်ဖြစ်တော့ ဆက်လက် ထုတ်လုပ် ပေးနိုင်ဖို့ကိုလည်း တောင်းဆိုထားတာပါ။
Bloomberg ရဲ့ သတင်းအရတော့ Raimondo က ပြောကြားရာမှာ Ford CEO Jim Farley နဲ့ GM CEO Mary Barra တို့ကလည်း သူတို့ လိုအပ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေထက် အနည်းငယ် ပိုရလာပြီ ဖြစ်တာကြောင့် အခြေအနေတွေ အနည်းငယ် ‌အကောင်းဘက် ရောက် လာပြီလို့ ဆိုခဲ့တာပါ။ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတာကတော့ Goldman Sachs ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်က သုံးသပ်ချက်အရ အခုလို ပြတ် တောက်မှုရဲ့ အမြင့်ဆုံး အခြေအနေဟာ အခု ဒုတိယ လေးလပတ်ထဲမှာခံစားရဖို ရှိနေပြီး ဇူလိုင် လမှာ တော့ ထုတ်လုပ်ရေး တွေ ပြန်မြင့် တက်လာလိမ့်မယ်လို့ ဆိုခဲ့တာပါ။ အခုလိုမျိုး အစိုးရဘက်က အပေါင်း လက္ခဏာဆောင်တဲ့ စကားရပ်မျိုးတွေ ကြားနေရပေမယ့်လို့ တစ် ဖက်မှာလည်း Samsung ရဲ့ ကြိုးပမ်းချက် ၊ Goldman Sachs ရဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေနဲ့ အမျိုးမျိုးသော ထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံတွေ ကတော့ ပစ္စည်း ပြတ်တောက်မှုတွေကြောင့် နှေးကွေးတာ ရပ်ဆိုင်းလိုက် ရတာတွေ ရှိနေဆဲပါပဲ။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အခု အခြေအနေရဲ့ကာလ ကြာရှည်အတွက် တကယ့် အစစ်အမှန် ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတစ်ခုကို မကြာခင် ရှာတွေ့နိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ ယူဆရပြီး တိုးတက်‌လာ တယ် ဆိုတဲ့ အတွက်တော့ ဝမ်းသာရမှာ ဖြစ်ကာ လျော့နည်း နေသေးတဲ့ အခြေအနေအချို့ကို တော့ဆက်လက် ရင်ဆိုင်နေကြရဦး မှာပဲဖြစ် ပါတယ်။
The post တစ်ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာ Semiconductor ပြတ်တောက်မှု ကိစ္စ အဆင်ပြေတော့မယ်လို့ ဘိုင်ဒန်ပြောကြား! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-07-24T15:01:58+06:30July 24th, 2021|MYCARS MYANMAR|
လျှပ်စစ်ကားတွေ များပြားလာမှုကြောင့် ဗြိတိန်‌တွင် ကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှု ၁၁.၈ ရာနှုန်းခန့် ‌လျော့ကျလာ !
သာမန် Gas Model ထက်တောင် ဈေးပိုများနေတဲ့ 2022 Kia Sorento Hybrid ကားသစ် !
ခပ်သေးသေး လျှပ်စစ်ကား တစ်စီး အဖြစ် ပေါ်ထွက်လာ ဦးမယ့် Tesla Model2ကားသစ်
အပြောင်းအလဲ များစွာနဲ့ ထွက်ပေါ်လာမယ့် 2022 Chevrolet Suburban နဲ Tahoe !
မျက်နှာနဲ့ Lock ဖွင့်နိုင်တော့မယ့် ကားတစ်စီး !
ယာဉ်ကနေ အရာအားလုံးကို သတိပေးနိုင်မယ့် စနစ်ကို စမ်းသပ်တီထွင်နေတဲ့ Stellantis !
ရဲကား တစ်စီး ဖြစ်လာတော့မယ့် Ford Mustang Mach-E !
အမေရိကဈေးကွက်ထဲ အမြန်ဆုံး ရောင်းရတဲ့ ကားဖြစ်လာတဲ့ Hyundai Santa Cruz!
ဈေးကွက် တစ်ခုထဲမှာတော့ အဆုံးသတ်လာပြီဖြစ်တဲ့ Nissan GT-R !
ဒေါ်လာ ၄၆၀၀၀ ကျော်အထိ ကျသင့်မယ့် 2022 Toyota Sienna Woodland Edition အသစ် !
အရောင်အသွေးစုံလင်စွာနဲ့ အနုပညာမြောက်လှပနေတဲ့ BMW ကားတစ်စီး !
သတိပေးချက်တွေကို လျစ်လျူရှုခဲ့လို့ အိမ်ပါ မီးစွဲလောင်မလို ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ Chevy Bolt ပိုင်ရှင် !